2017 – Year – Alpha Premium
The Long Road Home (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမဲ့ စစ်ကားလေးကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က အီရတ်မှာ အမေရိကန်တွေ တပ်ဖြန့်စခန်းချနေစဉ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 9/11 ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်က အီရတ်ကိုလက်စားရန် ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ ဆဒ်ဒမ်ဟူစိန်အစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးနောက် စစ်ပြီးသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒေသတိုးတက်ရေးအတွက် အမေရိကန်တပ်များဟာ အီရတ်မှာတော့ တပ်ဖြန့်စခန်းချနေဆဲဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသံချပ်ကာတပ်မဟာလည်း အီရတ်မှာ တစ်နှစ်တပ်ဖြန့်စခန်းချဖို့ရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ ကွန်မန်ချီအနီတပ်စုဟာ လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းလှည့်ရင်းအပြန်မှာ ချုံခိုအတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တပ်စုဟာ ဖောက်မထွက်နိုင်ဘဲ လမ်းကြားတစ်ခုက အိမ်တစ်လုံးမှာ ပိတ်မိသွားပါတော့တယ်။ သူတို့တပ်စုကို ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက် ဌာနချုပ်တပ်ရင်းက အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ စစ်သည်တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ မတူညီတဲ့ဘဝပုံစံ၊ မိသားစုတွေအကြောင်းကိုလည်း ရိုက်ပြထားပါတယ်။ ဒီကားထဲက ဇာတ်ကောင်တိုင်းဟာ အပြင်မှာတကယ်ရှိပြီး တစ်ချို့ဆိုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ အပစ်အခတ်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရှု့အားပေးကြပါဦး ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးမဲ့ စစ္ကားေလးကေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အီရတ္မွာ အေမရိကန္ေတြ တပ္ျဖန္႔စခန္းခ်ေနစဥ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 9/11 ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္က အီရတ္ကိုလက္စားရန္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။ ဆဒ္ဒမ္ဟူစိန္အစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ ...
Chandrakanta ဟိန္ဒူ စီးရီးတွဲတွေ ခံစားချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် အပိုင်းတော့များပါတယ်. zip ဖိုင်နဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒေါင်းနိုင်ပါတယ် Naugarh တိုင်းပြည်မှ မကောင်းဆိုးဝါးဘုရင်မကြီး အီရာဗတ်တီဟာ အရှင် Vishnu ရဲ့ စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးဓားမြှောင်ကိုရယူပြီး အဆုံးအစမဲ့မှော်ပညာများဖြင့် Vijaygarh တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ချင်နေခဲ့ပါတယ် မင်းသမီးလေး ချန်ဒရာရဲ့ အမေဖြစ်သူ ထိုဓားမြောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘုရင်မ Ratnaprabha ဟာ သမီးဖြစ်သူရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် မဆုံးပါးခင်မှာ မှော်အစွမ်းနဲ့စီမံပေးခဲ့မှုကြောင့် Suryagarh တိုင်းပြည်မှ ကလေးမရှိတဲ့ သာမာန်အရပ်သား တံငါသည်ဇနီးမောင်နှံဆီပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ဓားမြှောင်ကိုတော့ အရှင် Vishu ဘုရားကျောင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၂၁ နှစ်ကြာလျှင် ချန်ဒရာကိုပေးဖို့အတွက် သိမ်းထားခဲ့ပါတယ် အတိတ်မေ့ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ချန်ဒရာတစ်ယောက် သူမရဲ့ ဘဝမှန်နဲ့ မှော်ပညာအစွမ်းရှိတာကိုမသိပေမယ့် ချန်ဒရာဟာ လှပပြီး ကြောက်ခမန်းလိလိ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Aiyarra ရဲ့ အမျိုးသမီးစစ်သည်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ် ၂၁ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ အီရာဗတ်တီဟာ ဓားမြှောင်ကိုရှာဖွေနေသေးချိန်မှာ Naugarh တိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသား Veerendra ဟာ ချန်ဒရာနဲ့ဆုံတွေ့မိပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ မိဘချင်းသဘောတူပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းကစေ့စပ်ထားကြောင်းနဲ့ မင်းသားလေးရဲ့မိထွေးကြောင့် ချန်ဒရာတစ်ယောက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ကြောင်းကိုမသိကြပါဘူး မင်းသားလေးကတော့ ထူးချွန်လှတဲ့ ချန်ဒရာကို ...
Chicago Typewriter ၁၉၃၀ ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီး(နှစ်ခြမ်းမကွဲခင်ပေါ့ 😁) ဂျပန်လက်အောက် ကျရောက်တဲ့အချိန်က လူသုံးယောက်ဟာ ဒီဘက်ခေတ်အချိန်မှာ လူဝင်စား ပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့သုံးယောက်နဲ့ ရှေးဟောင်းလက်နှိပ်စက်တစ်လုံးကြားက ဆက်စပ်မှုတွေကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုမယ့် Drama လေးဖြစ်ပါတယ်... - ပရိသတ်တွေရဲ့ Idol တစ်ယောက်လိုမျိုး Best Seller စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Han Se Ju အဖြစ် Yoo Ah In (Sungkyunkwan Scandal ဆောင်ဂျန်ဂွမ် အရှုပ်တော်ပုံ, Fashion King, Jang Ok Jung, Six Flying Dragon ပြည်တော်သစ်ဆီသို့ ထဲမှ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်လက်..... ) - Han Se Ju ရဲ့ Biggest Fan Jeon Seol အဖြစ်မင်းသမီး Lim Soo Jung ( Movie တွေသာအရိုက်များတဲ့ မင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့ Chicago ...
TMDb: 8/10 14 votes
Stranger Stranger(2017)ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း ******************************* Stranger Season 1 (16) Stranger Season2(16) ရှေ့နေရုံးက အမှုစစ် တစ်ယောက်ဆီကို လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်…. သူက ဒီရှေ့နေကို ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပေးဖို့ ဝန်မလေးသလို သူဒုက္ခရောက်မယ့်အရေးက လွတ်ဖို့ဆိုဘာမဆိုလုပ်မယ့်ပုံပါပဲ…. ကြည့်ရတာ ဒီလူသိထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကိစ္စတော်တော်များများရှိသလို ထိပ်သီးပိုင်းကလူကြီးတွေကလည်း အန္တရယ်ရှိတဲ့ သူ့ကိုရှင်းထုတ် အပြစ်ပုံချချင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်… ဒါ့ကြောင့် တော်လွန်းတဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ဆီ ကာကွယ်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်… အမှုစစ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့ နောက်နေ့ အကူအညီလာတောင်းတဲ့သူအိမ်ကို လိုက်သွားတယ်…အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ နောက်ကျသွားပါပြီ…ဘာဖြစ်လို့ဆို ရှေ့နေမရောက်ခင်ကထဲက ဒီလူဟာ အသတ်ခံလိုက်ရလို့ပါပဲ….. ဒီစီရီးက အပိုင်း(၁)မှာတင် ခပ်သွက်သွက်စဖွင့်ထားတယ်…. လူသေမှုနဲ့စတင်ပြီး နှုတ်ပိတ်ခံရတဲ့ သဲလွန်စများနဲ့ ပျိုးထားသလို အမှုစစ်တွေ ရဲတွေကလည်း အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေထုတ်တဲ့ အခန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားစရာ ပြထားတယ်…အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ တင်ပြထားသလို အီနေတာကိုမရှိဘူး…Tempo က အပိုင်းတစ်မှာကထဲက တဖြည်းဖြည်းတင်သွားတာ…ကျသွားတယ်ရယ်လို့မရှိဘူး…အချစ်အမုန်း သရေကွင်းဝါးပြီး ပန်းခြံထဲပြေးလွှားနေတဲ့ တေ့လွဲရိုစီးရီးတွေ လိုတော့မဟုတ်ဘူး..သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဖက်ရှင်အလှအပတွေနဲ့မသွားဘဲနဲ့ တကယ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နွမ်းလျှလျှဟန်တွေနဲ့…ပြီးတော့ ဆရာကျလွန်းတဲ့ မြေခွေးတွေ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်တဲ့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းဖို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချနင်းဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ အပြုံးတုအောက်က ကောက်ကျစ်တဲ့ လူတွေတလှေကြီးနဲ့ ဒီစီးရီးက ဖွဲ့စည်းထားတယ်… ဒါ့ကြောင့် ...
TMDb: 8.7/10 33 votes
Ozark IMDb 8.4 လူ တစ်သိန်းခွဲလောက်က 8.4 vote ပေးထားတော့ အတော်ကို ကောင်းမှန်းသိသာပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ crime, thriller, drama အမျိုးအစားပါ။ တစ်စီစန်ကို ၁၀ ပိုင်းနှုန်းနဲ့ အပိုင်း ၃၀ ရှိတာမို့ အဝကြည့်ရမှာပါ။ တကယ်လို့ အမေရိကန်မှာ ခင်ဗျားလက်ထဲကို လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ ငွေ တစ်သန်းလောက် ရောက်လာရင် ခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲ။ ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ ဘဏ်ကို သွားသွင်းလို့မရပါဘူး။ တစ်သောင်းကျော်တာနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဌာနက လိုက်လာမှာပါ။ ကားဝယ်မလား? မရပြန်ပါဘူး အကောက်ခွန်က ချက်ချင်းလိုက်လာမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ဘာလုပ်မလဲ။ တစ်သက်လုံး အသေးသုံးလေးတွေနဲ့ မုန့်ဝယ်စား ကားဆီဖြည့်ဖို့လောက်ပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီငွေတွေက ငွေမည်းတွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ခင်ဗျားဘိန်းဖြူမှောင်ခိုကူးပြီး ငွေ သန်း ၁၀၀ ချမ်းသာလည်း သုံးချင်တိုင်း သုံးမရသေးပါဘူး။ ဒီငွေတွေကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ ငွေမည်းတွေကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် လျှော်ဖွတ်ရတယ်၊ ...
TMDb: 8.1/10 752 votes
Dark Season 1+2+3 Complete Deep ပြီး Dark တဲ့ စီးရီးလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စီးရီးနာမည်ကတော့ Dark ပါ။ ဒီကားလေးက လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် တွေးတောပြီး မျောပါသွားရတဲ့ feelingကိုကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကတော့ လုံးဝအကြိုက်တွေ့သွားစေရမှာပါ။ လူသားတွေ နားလည်လက်ခံထားတာက မနေ့ကပြီးရင် ဒီနေ့လာမယ်။ ဒီနေ့ပြီးရင် မနက်ဖြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်းသွားနေကြတယ်လို့ပါပဲ။ တကယ်လို့ အဲ့လိုအချိန်ကာလတွေဟာအစီအစဉ်အတိုင်းရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ စက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုလိုမျိုး အဆုံးအစမရှိစွာ လည်ပတ်နေတာမျိုးဆိုရင်ရော? ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေပေါ်မှာ အခြေခံကာဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ စီးရီးကောင်းလေးကတော့ ပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့… ဝစ်ဒန်ဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ အီရစ်ခ်ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားတာကနေ ဇာတ်လမ်းကစပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုနည်းပါးပြီးအေးချမ်းလှတဲ့ ဒီမြို့လေးမှာ ကလေးတစ်ယောက်ပျောက်ချင်းမလှ ခြေရာလက်ရာ သဲလွန်စတစ်ခုမကျန်ပဲပျောက်ဆုံးသွားတာကတော့ ရဲမှုး အောလ်ရစ်ခ်ျအတွက်ခေါင်းခဲစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၃နှစ်ကလဲ မက်စ်ဆိုတဲ့ကလေးတစ်ဦးအခုလိုပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကံကြမ္မာစက်ဝန်းတစ်ပါတ်ပြန်လည်တာများလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အားလုံးထိတ်လန့်နေချိန်မှာ ရဲမှုးအောလ်ရစ်ခ်ျရဲ့သားငယ်လေး မစ်ကယ်လ်ပါ ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၃နှစ်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မက်စ်ကို ပျောက်သွားချိန်ကအသက်အရွယ်အတိုင်း ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလောင်းအနေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ? မက်စ်ရဲ့အလောင်းကလဲလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တစ်နေ့ကမှသေထားတဲ့အလောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါ… Imdb Rating 8.6/10 ရရှိထားတဲ့ စီးရီးလေးမို့ မကောင်းမှာတော့မပူရပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် အတွေးနယ်ချဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်ကို သဲတစ်ထိတ်ထိတ်ရင်တစ်ဖိုဖိုခံစားချင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီ Dark ဆိုတဲ့စီးရီးလေးကို ...
TMDb: 8.5/10 2197 votes
Dark Season 1+2+3 Complete
TMDb: 7.3/10 141 votes
13 Reasons Why Season 1+2+3+4 Complete ဒီစီးရီးကိုတော့ လူအတော်များများ ကြားဖူးပြီးနေလောက်ပါပြီ။ Netflix ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကျော်ကြားသွားတဲ့ စီးရီးပါပဲ။ IMDb နဲ့ RT တွေမှာ rating9ကျော်နေပြီး ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ ချီးကျူးသံတွေ ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးလေးပါ။ ၂၁ ရာစု အကောင်းဆုံး High School Drama တွေထဲက တစ်ခုလို့ ချီးကျူးကြတယ်။ စလယ်ဆုံး ဇာတ်ရှိန်မကျဘဲ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်။ ခံစားချက်မျိုးစုံကို ပေးနိုင်တယ် စသည်ဖြင့် မှတ်ချက်တွေပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဝေဖန်ခံရတဲ့ အချက်ကတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဟာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့ပြီးမှ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ခမ်းနားစွာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်နေလို့ သတ်သေမှုတွေကို တနည်းအားဖြင့် အားပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောသူတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစီးရီးရဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ အထက်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ဖိအား၊ခံစားချက်တွေတွေကို နားလည်ဖို့နဲ့ ဆရာတွေမိဘတွေ ပိုပြီး သတိထားမိလာစေဖို့၊ ကျောင်းသားသူတွေကြားထဲက ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ပိုကောင်းမွန်လာဖို့ အားပေးတဲ့အချက်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ဒီစီးရီးရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင် ၂ ယောက်ဟာလည်း တကယ်ကောင်းမွန်ခဲ့တာမို့ ချီးကျူးမှုတွေ အများအပြားရရှိထားပြီး သူတို့ သရုပ်ဆောင်ဘဝလမ်းကတော့ ပိုပြီးတောက်ပြောင်လာလိမ့်မယ် ထင်မိပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းပြောရရင် အစမှာ ဟန်နာ ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံသွားခဲ့တာက စပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာ ဆရာတွေ၊ကျောင်းသားတွေ ...
TMDb: 7.6/10 1578 votes
13 Reasons Why Season 1+2+3+4 Complete
Mindhunter Plot 1977 ခုနစ္မွာပါ။ FBI က Special Agent Holden Ford ဟာ ျပန္ေပးဆြဲသမားေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းနည္းစနစ္ေတြ သင္ၾကားေပးေနတဲ႔ ဆရာတစ္ေယာက္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလွည့္ ရဲစခန္းေတြကိုသင္တန္းလိုက္ေပးေနရင္းနဲ႔ သူေတြးမိတာက ဒီအသစ္ေတြ႕ႀကံဳလာရတဲ႔ လူသတ္မႈေတြက ဟိုးအရင္လို အျဖဳအမည္း ဆိုးတယ္ေကာင္းတယ္ဆိုတာပဲ မရွိေတာ႔ဘူး။ အရင္က မေက်နပ္လို႔ သတ္တယ္ကြာ၊ မုန္းလို႔သတ္တယ္ကြာ၊ လိုခ်င္တာရွိလုိ႔ သတ္တယ္ကြာဆိုတာေတြ ရွင္းေပမဲ႔ အခုေနာက္ပိုင္းေပၚလာတဲ႔ လူသတ္သမားေတြက ဘာမွမဆိုင္ဘဲ သက္သက္ကို သတ္ျဖတ္တယ္၊ မုဒိမ္းက်င့္တယ္၊ အေလာင္းေတြကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္ၾကတယ္။ ဒါေတြကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲ။ ေပ်ာ္လို႔လုပ္တာလား၊ လုပ္ခ်င္လို႔ကို လုပ္တာလား။ ဒီလိုရက္စက္တဲ႔ အျပဳအမူမ်ိဳးလုပ္ရေလာက္ေအာင္ သူ႔ကို ဘာေတြက လံႈ႕ေဆာ္ခဲ႔လို႔လဲ ၊ ဒီအခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သိထားခဲ႔လို႔ရွိရင္ လူသတ္သမားေတြျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးႏိုင္ေလမလား စတဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို ေတြးေခၚလာခဲ႔ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ Holden Ford ...
TMDb: 7.8/10 805 votes
Money Heist Money Heist (Netflix) Netflix ရဲ့ အကောင်းဆုံးစီးရီးလို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်ကြသလဲ? Admin ကတော့ တစ်ခုတည်း လုံးဝ‌မရွေးနိုင်ဘူး နိုင်ငံအလိုက်ခွဲပြီး အမေရိကန်ဆို Stranger things နဲ့ အင်္ဂလန်ဆို Black Mirror ကိုရီးယားဆို Kingdom လို့ဆိုရလိမ့်မယ် အခုတော့ စပိန်ဆို La casa de Papel (Money Heist) ပါ ထပ်ထည့်ရတော့မယ် (La casa de Papel) The paper house ဆိုတဲ့စကားကို admin တော့ အတော်သဘောကျတယ် ပိုက်ဆံဆိုတာ တကယ်‌တမ်းတော့ လူတွေက ကုန်ပစ္စည်း‌တွေနဲ့ လဲလှယ်ဖို့ တန်ဖိုးကပ်ထားတဲ့ စက္ကူတစ်ရွက်ပဲ ဘဏ်ဆိုတာ အဲ့ဒီစက္ကူတွေရဲ့ အိမ်ပေါ့ စက္ကူကနေ တဖြည်းဖြည်း လူတွေအတွက် ဒုတိယဘုရားသခင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ။ Black mirror ထဲက Ashley ဆိုခဲ့သလို God money I'll do anything ...
TMDb: 8.5/10 4237 votes